28/09/2011 : Filoha RAVALOMANANA Marc :"Mahatsiaro voafitaka tamin'ny fanaovan-tsonia"
Nanao antso avo tamin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny Filoha RAVALOMANANA androany satria "mahatsiaro voafitaka ny vahoaka Malagasy ary isan'izany ny tenako" hoy izy. Taorian'ny fanaovana-tsonia tamin'ny 17 septambra teo manko dia nanantena ny vahoaka fa hanova famindra ny mpanongam-panjakana. Ankehitriny anefa dia mbola mitohy ny famoretana ny mpiray tanindrazana ary mbola miampy fireharehana etsy sy eroa fa efa nahazo fankatoavana. "Ianareo no namporisika anay Malagasy hanao sonia ka andraikitrareo ny manao izay hahatanteraka ny tondro zotra haingana" hoy ihany ny Filoha RAVALOMANANA raha nitodika manokana tamin'ny vondrona SADC ny tenany. Ankoatr'izay dia niantso ny fahatsiarovan-tenan'ireo foloalindahy ataon'ny FATE fitaovana ny tenany. Nambarany fa efa fantatr'izao tontolo izao ny mombamomba ireo tsy maty voalavo an-kibo ka tsy tokony hanaiky izany intsony ny foloalindahy. Teo am-pamaranana dia nanentana hatrany amin'ny firasain-kina ny Filoha RAVALOMANANA indrindra mandram-piandry izay mety ho fanapahan-kevitry ny TROIKA izay hivory atsy ho atsy.
21/09/2011 : Filoha RAVALOMANANA : "Aza misahirana maka ahy aty fa efa hoavy aho"
"Manala baraka ny Malagasy ny fihetsiky ny fitondrana tsy ara-dalàna" hoy ny Filoha RAVALOMANANA Marc raha nitafa mivantana tamin'ireo vahoaka maro be tonga teo amin'ny Kianjan'ny Finoana ny tenany. Nambarany fa tohina amin'ny sakantsakana ataon'ny FATE ny firenena rehetra manaraka akaiky ny raharaha momba an'i Madagasikara. Fihetsika tsy mendrika tokoa ny famoahana didy fampisamborana taorian'ny fanaovana sonia ny tondro zotra satria mandika sahady ny fametrahana fahatoniana takian'ny sonia vao natao. Manampy trotraka izany ny filazana an-gazety fa handefa manamboninahitra folo any Afrika Atsimo ny FATE hisambotra ny Filoham-pirenena. Mikasika ity farany ity indrindra dia nampita hafatra ho an'ny mpanongam-panjakana ny Filoham-pirenena ka hoy izy hoe "aza misahirana maka ahy aty fa efa kely sisa dia ho avy aho".
Momba ny ampamoaka izay nataon'ny Pr. Zafy Albert androany kosa dia nentanin'ny Filoha RAVALOMANANA Marc ny vahoaka mba hino sy hanaraka izay teneniny satria "tsy olonolom-poana akory ny Pr. Zafy Albert ary manana porofo izy matoa miteny ireo zavatra tsy mety nataon'ny mpanongam-panjakana ireo". Nohamafisin'ny FIloha RAVALOMANANA moa fa tohanany hatramin'ny farany ny fitoriana an'i TGV izay nataon'ny Pr. Zafy Albert.
17/09/2011: Tena nahazo alalana avy amin'ny Filoha RAVALOMANANA ireo nanao sonia
Mendri-piderana, tia tanindrazana, mitsinjo marina ireo mpiray tanindrazana aminy ary vonona ny hiara-hiasa amin'ireo fanetriben'ny firenena, nahatonga izao krizy lava reny izao. Izay no azo hamintinana ny fanapahan-kevitry ny filoha Marc Ravalomanana. Na tsy teto an-toerana aza ny tenany, satria dia nahazo ny NOTAM avy amin'ny Fat, dia nanome tso-drano kosa ireo solon-tenany eto hanao soani ny tonjozotra tany Sandton. Mahazo tombony lehibe amin'ity tondrozotra ity ny Fat satria dia mbola mijanona ho filoha ihany Andry Rajoelina. Saingy fandresena lehibe ho an'ny tolona nimatimatesana nandritra ny 2 taona mahery iny fanaovana sonia iny satria dia afaka mody tsy misy fepetra ny filoha Ravalomanana. Io izao no sisa andrasana ny fampiharana azy.
Betsaka no niahiahy ny mikasika ilay NB nataon'ny SADC, « milaza fa dia tsy manana fahefana hitsabaka amin'ny raharaham-pitsarana Malagasy izy ireo » saingy tsy misy atahorana izany. Hanomboka izao mantsy ny tena tetezamita ary olon'ny dada no ho maro an'isa ao anatin'izany governemanta izany. Heverina fa hanamora ny fodian'ny dada izany. « Aza matahotra, minoa fotsiny ihany » mitombina hatrany io tenin'Andriamanitra nampiharin'ny filoha Ravalomanana teo ain'ny fiainany.
Miova ny tolona amin'izao, hanomana ny fodian'ny dada isika!!
10/09/2011 : Filoha RAVALOMANANA : "Aza manaiky atao fitaovana ianareo miaramila"
Nahitsy tanteraka ny Filoha RAVALOMANANA androany raha nitodika tamin'ny Tafika Malagasy. "Aoka ianareo tsy hanaiky hatao fitaovana" hoy ny Filoham-pirenena "satria fanjakana tsy ara-dalàna io". Nomarihiny manokana tamin'izany ny hetsika izay nokasain'ny mpandala ny ara-dalàna hatao androany. "Intimidation ny nataonareo androany" hoy ny Filoha RAVALOMANANA "satria vao nikasa hihazo ny kianjan'Ambohijatovo ny vahaoaka haneho hevitra am-pilaminana dia nilanjanareo fitaovam-piadiana mahery vaika".
Nentiny handresena lahatra ireto mpitandro filaminana ireto moa ny zava-nisy tany Serbie. Nazavainy fa efa am-polon-taona aty aoriana vao notsaraina ireo tompon'antoka tamin'ny famoretana ireo serba tamin'izany fotaoana. Notsoriny moa fa misy ny lisitra tonga any amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mikasika ny anaran'ireo manam-boninahitra sy miaramila mbola manaiky hampiasain'ny FATE ho famoretana ny vahoaka.
Nitondran'ny Filoham-pirenena fanazavana ihany koa ny mikasika ny iraka indroa miantaona halefan'ny TROIKA eto amintsika ny herinandro hoavy io. Nambarany ary fa ny andiany voalohany, izay ho tonga rahampitso, dia handalina manokana ny mikasika ny fiarovana sy ny fandriam-pahalemana. Ny faha-14 septambra izao kosa no higadona eto Madagasikara ireo andiany faharo izay laharana Minisitra fa tsy olonolom-poana akory. Nambaran'ny Filoha RAVALOMANANA Marc anefa fa "efa tsy miafina amin'izao tontolo izao intsony ny marina eto amintsika" ary mbola hampitondra antotan-taratasy ho an'ireo iraky ny TROIKA ny tenany amin'io herinandro mitsidika io mba ahafahan'ireo iraka mandalina kokoa ny fomba hamahana ny krizy eto amintsika.
20/08/2011 : Filoha RAVALOMANANA Marc : "mety amin'ny Malagasy ny tapaka tany Luanda"
Tsy nahomby ny asa ratsy ataon'ireo masoivoho teo aloha sasantsasany momba ny tery vay manta ny azahoan'ny FATE fankatoavana iraisam-pirenena. Nisy tamin'izy no niezaka nanely vaovao tsy marina tamin'ireo Filoham-pirenena nivory tany Luanda saingy tsy nahomby izany satria nohamafisin'ireto farany ny fanapahan-kevitra tany Santon. Araky ny nambaran'ny Filoha RAVALOMANANA Marc tamin'ny tafa nataon'ny tamin'ireo vahoaka tonga maro teny amin'ny Kianjan'ny Finoana dia noraisin'ny TROIKA an-tanana manomboka eto ny famahana ny olana aty amintsika.
Mbola tsy sasatra ihany anefa ny Filoham-pirenena RAVALOMANANA ny miantso ny fahatsiarovan-tenan'ny Malagasy rehetra, indrindra ny mpanao politika. "Tsy misy tompony mihoatra antsika ka ny vahaolana ny dia ny fiverenanay an-tanindrazana hiatrika ny fifampidinihana hamahana ny olana" hoy ihany ny Filoha RAVALOMANANANA Marc.
17/08/2011 : Filoha RAVALOMANANA : "Tokony tsy manaiky atao kilalao ny Malagasy"
Antotan-taratasy 35 pejy no nentin'ny Filoha RAVALOMANANA nampahafantatra ny zava-misy marina aty Madagasikara. Natolony ireo Filoham-pirenena mpikambana ao amin'ny SADC rehetra izany ary "efa eo am-pandinihana izany izy ireo ankehitriny" araka ny nambaran'ny Filoham-pirenena. Ankoatr'izay dia nambaran'ny Filoha RAVALOMANANA fa manameloka ny fihetsika mitanila ataon'ny Dr. Simao ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Nambaran'ireo tomponandraikitra ao amin'ny SADC izay mivory any Luanda androany sy rahampitso ary fa "raha tena mijoro ho mpanelanelana i Simao dia tokony any Luanda no misy azy amin'izao fotoana izao". Tsy vitan'izany fa mahagaga ireo manam-pahefana ao amin'ny SADC ireo ny fahanginan'ny Malagasy manoloana ny fanitsakitsahana ataon'ity Mozambikana mpikarama an'ady politika ity amin'ny fiandrianany.
Manoloana ireo rehetra ireo ary dia nanafatra ny Filoham-pirenena Marc RAVALOMANANA amin'ny tokony hananana ny tena hambompom-pirenena ka tsy anekena moramora foana hatao kilalao ao anatin'izao famahana ny krizy eto Madagasikara izao. Namafisiny ny antso amin'ny firaisan-kinan'ny hery rehetra ahafahana manohatra izao asa ratsy ataon'ny mpanjanaka sy ireo karamainy izao. Niangavy ny Malagasy rehetra ihany koa ny Filoham-pirenena mba hitondra am-bavaka izao fivoriana atao any Luanda izao satria fanapahan-kevitra lehibe mikasika ny Firenentsika no ho raisin'ny SADC mikasika indrindra ny fanatanterahana ireo tapaka rehetra nanomboka tany Sandton no mankaty.
Luanda Summit 2011 (PDF) 3.27 Mo
15/08/2011 : Namela hafatra ho an'ny mpitarika ny Filoha RAVALOMANANA Marc
Miomana ho any Luanda
Nandritra ny tafa an-telefonina nataony tamin'ny vahoaka mpandala ny ara-dalàna teo amin'ny Kianjan'ny Finoana no nanambaran'ny Filoha RAVALOMANANA fa tsy mitsahatra ny mampahafantatra an'izao tontolo izao ny zava-misy marina aty Madagasikara ny tenany. Ao anatin'izany indrindra ny fanomanany taratasy vaovao homena ireo mpitondra fanjakana mpikambana ao amin'ny SADC izay hihaona any Luanda amin'ity herinandro ity. Hihazo izany toerana izany rahateo ihany koa ny Filoha RAVALOMANANA ahafahany mifanakalo hevitra amin'ireo Filoham-pirenena ireo na dia tsy afaka miatrika ny fivoriana aza i Madagasikara satria voasazy.
Tsy hadinon'ny Filoham-pirenena RAVALOMANANA ihany koa ny niarahaba an'i Ralitera sy ny namany izay nahavita roa taona tany am-ponja vao navoaka. Nambarany fa tsy mbola vita ny tolona ho an'ireo namana any am-ponja satria tsy mbola nahazo fahafahana ny ankamaroan'izy ireo. Nomarihiny kosa anefa fa na inona na inona fihetsika ivelany ataon'ny FATE dia "tsy ho azo ny fankatoavana iraisam-pirenena raha tsy miverina an-tanindrazana hanao sonia ny fifanarahana" ny tenany sy ireo mpanara-dia azy.
"Ampandefero ny hambom-po"
Hafatra napetraky ny Filoha RAVALOMANANA tamin'ireo mpitari-tolona rehetra ny tokony hahaizana mandefitra sy mampandefitra ny hambom-po. Tsy tokony ho avy amin'ny mpandala ny ara-dalàna tokoa ny sakana tsy ahafahana mamaha izao krizy izao. Tokony ho modely hatrany amin'ny fikatsahana ny fifampihavanana ny mpitari-tolona rehetra ary manana adidy hanentena ny vahoaka hizotra amin 'izany lalana izany. Nanterin'ny Filoha RAVALOMANANA Marc teny Sabotsy Namehana fa tsy mbola vita ny asa amin'ny fampahafantarana ny marina an'izao tontolo izao. Nentaniny ny Malagasy mba tena hiray hina satria izay ihany no ahafahana mitondra mankany amin'ny fandresena.
06/08/2011 : Filoha RAVALOMANANA Marc : "Aza manantena fankatoavana iraisam-pirenena raha tsy ..."
Nitafa tamin'ny vahoaka teo amin'ny Kianjan'ny Finoana ny Filoha RAVALOMANANA Marc androany. Araky ny nambarany dia tsy tiany ho tompon-trano mihono ny vahoaka Malagasy satria ny Firenena iombonana no vokasiky ny olana. Nambarany fa nitafa tamin'ny mpanao gazety ny sekretera mpanatanteraky ny SADC ary voaresaka ny mikasika an'i Madagasikara nandritra izany. Nambaran'ny Dr. Salomao tamin'izany fa efa neken'izao tontolo izao ny tondrozotra saingy tsy nolazainy fa ilay efa nasiam-panintsiana io nakatoavina io. Nambaran'i Salomao kosa anefa, araky ny fampitam-baovao nataon'ny Filoha RAVALOMANANA, fa tsy manaiky hanao sonia izany ny Filoha RAVALOMANANA sy ny Amiraly Ratsiraka ary ny Pr. Zafy Albert.
Na eo aza izany rehetra izany dia nankasitrahin'ny Filoham-pirenena ireo mpanao politika efa manaiky fa ny sori-dalana nasiam-panintsiana ihany no afaka hamoaka an'i Madagasikara amin'izao krizy izao. Izany hoe manaraka ny fanapahan-kevitry ny vondrona iraisam-pirenena araky ny tapaka tany Sandton sy tany Addis-Abeba ary mamela ny fiverenan'ny sesitany rehetra an-tanindrazana sy manome fahafahana azy ireo hanao politika. Raha tsy ireo no tanteraka dia tsy hahazo ny fankatoavana iraisam-pirenena velively ireo milaza fa mitondra an'i Madagasikara.
30/07/2011 : « Tsy maintsy mody aho » hoy ny Filoha RAVALOMANANA Marc
Hetsika goavana fanomanana sahady ny fitsenana ny Filoha RAVALOMANANA no natao teo amin’ny Kianjan’ny Finoana Magro Behoririka androany. Tonga niatrika izany fotoana izany avokoa ny hery velona rehetra ao anatin’ny Ankolafy RAVALOMANANA sy ny Rodoben’ny Malagasy ho an’ny Tanindrazana. Toy ny famerenana farany mialoha ny seho an-tsehatra iray ny fihaonana androany raha ny fitsenana ny Filoha RAVALOMANANA no resahina.
Namaly ny antso ihany koa ireo sampan’ny Tiako I Madagasikara manodidina an’Antananarivo renivohitra ka nangorom-potsy Magro noravahin’ny sarin’ny Filoha RAVALOMANANA sy ny fitafy mampiranty izany.
Tany amin’ny fiafaran’ny hetsika dia ny Filoha RAVALOMANANA mihitsy no nampita ny vaovao sy nanome toky an’ireto mpandala ny ara-dalàna ireto. Nentaniny tsy hihaino izay fafy lainga etsy sy eroa ny vahoaka Malagasy. “Amin’izao dingana izao” hoy ny Filoha RAVALOMANANA “dia tsy misy afa-tsy ny fifampiresahan’ny samy Malagasy ihany no ahitana ny fomba anatanterahana ny sori-dalana nasiam-panintsiana”.
23/07/2011 : Mandamina faramparany ny fiverenany ny Filoha RAVALOMANANA Marc
"Mbola betsaka ny zavatra alamina mialoha ny fiverenako" hoy ny Filoha RAVALOMANANA Marc raha nitafa mivantana tamin'ireo mpiara-mitolona ny tenany. Efa manao izay fara-fahaizany ihany koa ny vondrona iraisam-pirenena mba ahafahana mahazo fifanarahana tena iombonana ahafahana mivoaka amin'izao fotoana izao. Mikarakara ny toerana sy ny fotoana ahafahana manatanteraka ny sonia amin'izany fivoahana amin'ny krizy izany izao tontolo izao ankehitriny. Zava-dehibe loatra manko ny maka fanapahan-kevitra amin'ny raharaham-pirenena ankehitriny satria sorohana ny mety hiverenan'ny krizy indray noho izay dingana tsy mantsy hatao manaraka eo. Nanome toky anefa ny Filoha RAVALOMANANA Marc fa tsy maintsy miverina an-tanindrazana handray anjara amin'ny fandaminana ara-politika eto Madagasikara.